Maro Anarana, Fa Tsiro Tokana Voavoatra Tao Amerika Latina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Oktobra 2016 18:56 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, Français, Ελληνικά, 日本語, Italiano, Español
Tsy maninona izay hiantsoanao azy, ny zavadehibe dia tena ilaina amin'ny fanaovana ny alfajores izy. Sary ao amin'ny Flickr an'i Kim Love (CC BY-SA 2.0).
Amin'ny teny Espaniola dia dulce de leche, manjarblanco, manjar, arequipe ary cajeta no ahafantarana azy. Fa ireo anarana rehetra ireo dia fangaro nentindrazana mitovy ihany no tondroiny— karazana ronono nodorana ho karamely izay tena ampiasaina amin'ny fikarakaràna sakafo Amerikàna Latina, na ao an-trano izany na any amin'ny indostria.
Isaky ny 11 Oktobra, ankalazaina mandritra ny Andron'ny Dulce de Leche (ampiasàna ny anarana izay ahafantarana azy bebe kokoa) ilay zavamamy. Feno karazana tantara maro momba ny niaviany, ary ny iray tena malaza dia mametraka izany ho avy any Arzantina:
[…] ny 11 Oktobra , tao amin'ny toeram-piompiana La Caledonia ao Cañuelas, tonga tamin'ny fiarahana manasonia fifanarahana fandriampahalemana i Juan Manuel de Rosas [politisiana tao Arzantina sady manamboninahitry ny tafika] ary ny mpifanandrina taminy ara-politika, Juan Lavalle.
[…] nisy vehivavy iray mpikarakara tokantrano tao amin'ilay toerana fiompiana, nikarakara lechada (ronono mamay nasiana siramamy) izay nahazatra an'i Rosas ny nisotro izany niaraka tamin'ny mate nentin-drazany. […] Reraka loatra ny Jeneraly Lavalle fony izy tonga tao ka resin-tory teo ambonin'ilay lamba voarary ho fitsotsoran'ny tompon'ilay toerana fiompiana. Rehefa nahita izany ilay vehivavy, nihazakazaka haingana nampandre ny mpiambina izy ary adinony tanteraka ilay ronono nokarakarainy. Rehefa niverina izy, efa lasa dity narihitra sy lokon-tsokolà ilay izy.
Tamin-tahotra, notsoriny tamin'i Rosas ny nanjo ilay lechada [ka] raha tokony hoe tezitra, nandramany izay tao anatin'ilay kaopy ary tiany be tokoa sy nifampizaràny tamin'i Lavalle.
Ireo tantara hafa dia mametraka ny fanaovana ilay zavamamy ho efa tany amin'ny fotoana talohaloha kokoa:
Ireo anganongano hafa milaza fa tany Shily, taorian'ny nitsaharany tamin'ny ady ho an'ny fahalalahana, ilay Jeneraly Mpanafaka San Martín dia zatra ny nankafy azy io, ary taty aorana kely dia nentina nankany Mendoza ary tany Buenos Aires [izy io].
Ao Frantsa, lazain'ny tantara fa nandritra ny fanentanan'i Napoleon no nitranga ny fahitàna (kisendrasendra) azy io, fony ireo bekotro maroholatra zatra nahazo isanandro anjara ronono mahamay, ary indray andro dia tavelan'ny mpahandro teo ambony afo ny vilany feno ronono efa nisy siramamy.
Rehefa nangotraka, nivadika ho kaonfitiran-dronono ilay izy (dulce de leche), ary tafiditra tao anatn'ny tantara Frantsay hoe ilay mpahandro no namorona azy io tamin'ny 1815.
Na ahoana na ahoana, isaky ny 11 Oktobra mandritra ny Andron'ny Dulce de Leche, omena voninahitra io sakafo mafilotra io, miaraka amin'ireo zavamamy sy tsindrin-tsakafo isankarazany, ka amin'izany ny daholobe dia afaka manandrana sy mividy karazan-javamamy isankarazany. Afaka mizara amin'ny rehetra ny tsiambaratelony ihany koa ireo mpahandro.
Anatin'ny fizorana ho any amin'ilay fotoana, resahan'ny olona ao amin'ny Twitter ny momba ilay rihitra ronono, amin'ny fampiasàna ireo anarana samihafa ahafantarana io zavamamy io :
Arequipe, dulce de leche, manjar blanco, topazo maso ny niaviany sy ny fangaro niandohana. Tahaka ny inona ny fitiavanao azy ?
Zatra ny nieritreritra aho hoe ny Guadalajara de Bugue, ao Cauca Valley… Manjar, arequipe… manjarblanco!
Voahosotra ho ny FAT MAN aho. Nisotro dulce de leche iray damizana.
Madio sy tso-po ny fitiavako ny churros nasiana arequipe.
Raha fintinina, tsy olana izay anarana iantsoanao azy na izay toerana niaviany. Ny mavesa-danja dia ny hoe tsy ho azo eritreretina ny mofomamy sy ny tsindrin-tsakafo nentim-paharazana tsy ahitàna io zavamamy io.